Bogga ugu weyn Blogyada Maaliyadeed ee Shakhsiyeed ee ugu Fiican: La cusbooneysiiyay 2021
Iyada oo saamaynta masiibada ay wali muujineyso madaxeeda, dadku waxay dhawaanahan sahaminayeen ikhtiyaarada xorriyadda maaliyadeed, taas oo iyaduna ka dhigtay baloogyada maaliyadeed kuwo caan ah. Blogyada maaliyadeed sida The NerdWallet, Doolarka fudud, iyo Maple Money si aan u xuso dhowr, waa baloogyo maaliyadeed shaqsiyeed oo ka caawiyay adeegsadayaashooda sameynta go'aamo maaliyadeed oo caqli badan.
Hadda waad yaabban tahay, 'maxay dhab ahaantii tahay baloog maaliyadeed shaqsiyeed'? Kuwani waa baloogyo kula taliya akhristayaashooda mowduucyo kala duwan sida Maaliyadaha Is -dhaafsiga, Amaahda, Lacag -dhigashada joogtada ah, Suuqyada Hantida, Caymiska, Canshuurta, Qorshaynta Maaliyadeed, Kaararka Amaahda, iyo Alaabada Maaliyadeed ee kale. Inta badan, baloogyadan waxay ku bilowdaan sheeko maaliyadeed shaqsiyeed oo ka mid ah blogger -ka oo malaha u horseeday guul ama ku sii socda halkaas.
Tusaale ahaan, Maaliyadda Gabadha Xariifka ah Boggooda ku saabsan wuxuu leeyahay socdaalka maaliyadeed ee aasaasaha, oo ay ku jiraan wanaagga, xumaanta, iyo foolxumada (sida ururinta bacda naqshadeeye aan loo baahnayn. Lol!) Waxay la wadaagaysaa sababta ay u abuurtay baloogga maaliyadeed ee shaqsiyeed waxayna sidoo kale siisaa talooyin la yaab leh dumarka u ooman xorriyadda dhaqaalaha. Laakiin yeynaan ka hor marin nafteena! Waxaan wali haynaa liisaska baloogyada maaliyadeed ee shaqsiyeedka ugu fiican sanadka 2021 ee soo socda. Aynu marka hore eegno faahfaahinta baloogyada maaliyadeed ee shaqsiyeed.
Blogyada Maaliyadda Shakhsiyeed faa'iido ma u leeyihiin?
Immisa Blogs Maaliyadeed Shakhsiyeed ayaa jira?
Sida Loo Sameeyo Blog Maaliyadeed Shakhsiyeed (Tallaabooyinka 8)
Tallaabada 1 - Dooro niche
Tallaabada 2 - Dooro magacaaga domain
Tallaabada 3 - Dooro ikhtiyaarka martigelinta
Tallaabada 4 - Ku rakib WordPress
Tallaabada 5-Ku rakib furayaasha aasaasiga ah
Tallaabada 6 - Dooro mawduuc oo naqshadee bloggaaga
Tallaabada 7 - Ku dar bogag sharci ah balooggaaga
Tallaabada 8 - Qorsheyso oo qor boostadaada koowaad!
Top 10 Blog -yada Maaliyadeed Shakhsiyeed ee 2021
#2 Gabadha Lacagta ah
#3 Ka Xoroow Broke
#4 Maaliyadda Gabadha Xariifka ah
#5 Lacagta Lamaanaha
#6 Maalgashiga Kulliyadda
#7 Wax walba Maaliyadda
#8 Ka fikir Save Retire
#9 Samurai Dhaqaale
#10 Hooyo Lacag-Keydisa
Blogyada naftooda ayaa lagu yaqaan inay yihiin il dakhli oo wanaagsan taas oo ah haddii aad taqaanid waxaad samaynayso. Laakiin bal aan aragno sida faa'iidooyinka baloogyada maaliyadeed ee shaqsiyeed ay yihiin.
Sidii hore loo sheegay, baahida loo qabo in dadku helaan kaalmo dhaqaale ayaa sii kordhaysa gaar ahaan hadda.
Lahaanshaha baloog maaliyadeed shaqsiyeed ma ahan mid aad u fudud sida yeelashada blog joogto ah. Waqtiga iyo dadaalka waa in la geliyaa gudbinta macluumaadka saxda ah ee la xiriira macaamiisha baloogga. Si kastaba ha ahaatee, shaqo weyn ayaa timaada abaalmarin ka sii weyn.
Blogyada maaliyadeed ee shaqsiyeed ayaa aad u macaash badan warshadaha hadda lagu qiyaasay inay ku kacayaan $ 1.35 tiriliyan.
Taasi waa faa'ido badan, ma u malaynaysaa?
Akhri ALSO: Lacag intee le'eg ayay tahay inaan sameeyo: Istaraatiijiyadda Maaliyadeed ee Shaqsiga ee 2021
Ka jawaabidda tan ayaa ah mid aan macquul ahayn sida tirinta xiddigaha cirka.
Hagaag, malaha taasi waa xoogaa xad dhaaf ah, laakiin si dhab ah, baloogyo cusub ayaa la abuuraa toddobaad kasta gaar ahaan baahida loo qabo hagitaan maaliyadeed. Qof walba wuxuu umuuqdaa inuu leeyahay sheeko maaliyadeed shaqsiyeed inuu sheego iyo sida ugu wanaagsan ee loo sameeyo taas marka loo eego baloogga maaliyadeed ee shaqsiyeed (si kasta ha u yaraadee).
Markay sidaa tahay, waxay umuuqataa inay jiraan kumanaan baloogyo maaliyadeed shaqsiyeed oo ka kala yimid dalka oo dhan (badiyaa Mareykanka) kuwaas oo helaya dareenka dadka isticmaala socodka.
Haddii aad raadineyso inaad abuurto baloog maaliyadeed shaqsiyeed, ha ka baqin, si la mid ah samada ayaa ku filan dhammaan xiddigaha, waxaa la dammaanad qaadayaa in adeegaha internetku uu martigelin karo dhammaan baloogyada maaliyadeed ee shaqsiyeed ee la abuuray.
Waxaa jira dhowr tillaabo oo loo baahan yahay in blogger -ka maaliyadeed ee shaqsiyeed uu qaado si uu u bilaabo. Marna lama soo koobi karo in bilowga baloog, xitaa aan laga hadlin blog -ka maaliyaddu ma aha wax fudud. Si kastaba ha noqotee, natiijadu waxay ka dhigaysaa geedi socodka oo dhan mid u qalma.
Tallaabada 1 - Xullo xulo
Waa inaad go'aansataa waxaad si dhab ah u rabto baloogga maaliyadeed ee shaqsi inuu ku saleeyo. Waxaad leedahay mowduucyo kala duwan oo aad ka soo xulato sida; maalgashiga, saamiyada, miisaaniyadda, xorriyadda maaliyadeed, iwm Liistadu waa mid aan dhammaad lahayn. Dooro niche aad jeceshahay ama wax aad la xiriiri karto si aad u hesho baloog aad ku raaxaysan lahayd.
Markaad dooranayso magac domain, waa inaad hubisaa inay tahay mid gaar ah oo aan aad u dheerayn Sidoo kale, waxaa muhiim ah in magacaaga domain laga dhigo mid ku habboon bartaada blogka. Tani waxay noqon kartaa hawl madadaalo iyo niyad jab leh labadaba. Waxaad la imaan kartaa tiro badan oo magacyo domain wanaagsan ah. Arrintu waxay tahay in noocyadii.com ee kuwii wanaagsanaa mar hore la qaatay.
Tan waxaa ka mid ah go'aaminta nidaamka maareynta maadada iyo aqoonsashada goobta lagu martigeliyo. Waxaa lagula talinayaa balooglayaasha inay adeegsadaan WordPress (.org), kaas oo ay taageeraan dhammaan bixiyeyaasha martigelinta waaweyn ee ka baxsan sanduuqa. Intooda badan waxay sidoo kale bixiyaan rakibidda hal guji. Ma aha inay adkaato xulashada bixiyaha martigeliyaha. Marka ugu horeysa ee aad bilawdo baloogga, waxaad raadin doontaa martigelinta la wadaago ama martigelinta WordPress.
Tani waa mid is-sharraxaysa maadaama madalku siinayo macluumaad tallaabo-tallaabo ah oo ku saabsan sida loo rakibo oo loo maro mareegaha.
Tallaabada 5 - Ku rakib furayaasha aasaasiga ah
Waxaa jira dhowr plug-INS oo lacag la'aan ah oo la heli karo si loo caawiyo socodsiinta hufan ee balooggaaga. Plug-ins sida W3 TotalCache (ee baloog degdeg ah); Yoast SEO (si Google ugu diro isticmaaleyaal badan bartaada); Askimet(loogu talagalay xannibaadda spam); Pixabay(si loo helo sawirro bilaash ah).
WordPress wuxuu bixiyaa boqolaal mawduucyo baloog oo lacag la’aan ah oo lacag leh. Mawduucyadiisa bilaashka ah ayaa faa iido leh haddii aad rabto inaad kharashyada hoos u dhigto, maadaama aad ka heli karto mowduucyo kaladuwan oo saaxiibtinimo leh si aad u abuurto goob muuqaal soo jiidasho leh.
'Shuruudaha iyo Shuruudaha' 'iyo beeninnada raacsan Waxay sheegaan in xitaa haddii aad bixinayso la -talin maaliyadeed, aadan u dhaqmin sidii lataliye maaliyadeed oo shaqsiyeed, sidaas darteedna aan sharci ahaan lagugu qaban karin go'aannada maaliyadeed ee akhristaha.
Tallaabada 8 - Qorshee oo qor qoraalkaaga koowaad!
Iyada oo leh dhammaan shaqada iyo maaliyadaha gala dhismaha blog, mar walba waxaa jiri doona su'aasha weyn '' Intee in le'eg ayay Bloggers -ka Maaliyadda Shakhsiyeed sameeyaan? '' Si daacadnimo ah, waa wax aad u adag in la xisaabiyo tirada ay sameeyeen bloggers maaliyadeed shaqsiyeed. Si kastaba ha ahaatee waxaa jira kala duwan $ 1500- $ 100000. Tani waxay ku saleysan tahay xaddiga taraafikada uu helo blog -ka iyo sidoo kale guddiga ka -reebitaanka iibinta suuq -geynta.
Fiiro gaar ah: Loo -shaqeeyayaasha maaliyadeed ee soo socda ee soo socda, waxay noqon doontaa midda ugu muhiimsan in la raadiyo baloog -yaqaanno khibrad leh oo la fiiriyo talooyin ku saabsan sida loo dhiso bloggaaga.
Akhri ALSO: 13 Siyaabood oo Lacag looga Sameeyo Hantida Ma guurtada ah iyada oo aan lacag la hayn 2021
Waa tan liiska 10 -ka sare ee baloogyada maaliyadeed ee shaqsiyeed ee blogosphere:
Frugalwoods waxay ku saabsan tahay lamaane da 'yar oo diiwaangelinaya safarkooda madaxbannaanida maaliyadeed. Mr. iyo Marwo Frugalwoods waxay hadda ku nool yihiin dhul badan oo acre ah oo ku yaal baadiyaha Vermont, ka dib markii ay ka tageen buuqii Boston. Waxay diiwaangeliyaan sida ay hanti u urursadaan iyagoo ku nool qaab nololeed qallafsan.
Aasaasayaasha Mariam Mohammed iyo Melissa Ma ayaa abuuray Gabadha Lacagta si ay haweenka uga caawiso inay maareyaan dhaqaalahooda una abuuraan bulsho taageersan geedi socodka. Waxay bixiyaan koorsooyin si ay u caawiyaan una ogeysiiyaan haweeneyda casriga ah inay ku wareegto adduunka maaliyadda iyo sidoo kale inay jeexdo waddo xorriyad maaliyadeed.
Isaga oo ka xoroobay deynta kaarka deynta ee ballaaran, blogger-kan ayaa go'aansaday inuu la wadaago khibradiisa si uu u baro dadka isticmaala sida loogu noolaado nolol aan deyn lahayn iyo sidoo kale sida si fiican loo fahmo saameynta adeegsiga kaarka deynta. Booqasho blog
Maaliyadda Gabadha Xariifka ah waa madal awood -siin maaliyadeed oo looga golleeyahay in haweenka la siiyo badeecado iyo adeegyo ku habboon iyo sidoo kale hagid maaliyadeed.
Blog -kan gabi ahaanba waa hanad! In kasta oo baloogyo badan ay diiradda saarayaan helitaanka xorriyadda maaliyadeed shaqsi ahaan, midkoodna ma diiradda saaro lamaanaha. Lacagta Lamaanaha si sax ah ayuu taas u sameeyaa, isagoo siinaya lammaanaha talooyin iyo tabaha si ay u gaaraan go'aanno maaliyadeed oo WADA JIR ah.
The Maal-gashadaha kuliyada waxay ku jirtaa hadaf si ay uga caawiso dadka isticmaala inay u kaydsadaan kulliyadda, inay sameeyaan xulashooyin maalgashi oo caqli -gal ah, iyo waliba inay bixiyaan amaahda ardayga iyagoo aan bangiga jabin.
Wax walba Maaliyadda taabanaya dhinac kasta oo maaliyadeed shaqsiyeed! Halku dhigoodu waa: "Dukaankaaga hal-joogga ah si aad u hesho macluumaad maaliyadeed oo ku saabsan wax walba!" Markaa haddii aad doorbidi lahayd inaad ku sugnaato hal goob dhammaan macluumaadkaaga, kani waa kan ugu fiican ee aad haysato.
Blog-kani wuxuu ku saabsan yahay helitaanka shaqsi ahaaneed iyo ka fikirka lacagta hab hadaf-ku-saleysan. Daaran ThinkSaveRetire, waxaad akhrin doontaa sheekooyin ku saabsan sida loo helo madaxbannaanida maaliyadeed oo aad u hesho xorriyad iyo xakameyn si aad ugu noolaato qaab nololeedka aad naqshadayso.
Waxaa laga soo qoray waayo -aragnimada aasaasaha, Samurai dhaqaale wuxuu si qoto dheer ugu sii socdaa maalgashiga, hantida maguurtada ah, qorshaynta hawlgabka, xeeladaha xirfadda, iyo in ka badan, si adeegsadayaashu u gaadhaan madaxbannaanida maaliyadeed si dhakhso ah, halkii ay hadhow noqon lahaayeen.
Aasaasaha Hooyo Lacag-Keydisa go'aansaday inuu la wadaago talooyinkeeda iyo tabaha ku saabsan sida loogu noolaado miisaaniyadda. Waxay sidoo kale siisaa koodhadh kuuboon, tusaalooyin liistada raashinka iyo sidoo kale soo jiidasho xor ah.
Maxay Yihiin Dhinacyada Ugu Muhiimsan Maaliyadda Shaqsiga?
Dhinacyada ugu muhiimsan ee maaliyadda shaqsiyeed waa kaydinta, maalgelinta, ilaalinta maaliyadeed, qorshaynta cashuurta, qorshaynta hawlgabka.
Maxaan ugu Baahan nahay baloogyada Maaliyadda Shaqsiyeed?
Blogyada maaliyadeed ee shaqsiyeed waxay ku hagaan akhristayaasha sida ugu wanaagsan ee loo ilaalin karo maaliyadda shaqsiyeed ee caafimaadka leh.
Waa maxay Boqolleyda Blogyada Lacag Sameeya?
Guud ahaan, qiyaastii 8% baloogyada ayaa sameeya lacag ku filan oo ay ku noolaadaan. Si kastaba ha noqotee, iyada oo ay ugu wacan tahay baahida loo qabo baloogyada maaliyadeed ee shaqsiyeed, waa aamin in la yiraahdo inta badan kuwa wax ku qora maaliyadeed shaqsiyeed waxay sameeyaan wax ka badan celceliyaha blogger-ka.
Maxay Blogyada u fashilmaan?
Blogyada ayaa guuldareysta maxaa yeelay ma abuurayaan waxyaabo xiiso leh. Taasi waxay ka dhigan tahay inaysan lahayn wax tayo leh oo gaar ah ama aad u fiican. Iyada oo la soo saaray waxyaabo badan, nuxur weyn ayaa ah sharadka ugu yar ee lagu galo ciyaarta.
Immisa jeer ayaan ku dhejinayaa Blogkayga?
Waxa ugu muhiimsan halkan waa in la yeesho jadwal dhajinta oo joogto ah oo lagu dhejiyo. Bilowga in kastoo, isku day inaad dhajiso 2-4 jeer toddobaadkii.
Halkaa waad haysataa! Haddii aad tahay baloogle hiwaayad ah oo raadinaya sida loo bilaabo, waxaa jira talooyin iyo tabaha nacasnimo weyn leh oo la adeegsado. Si kastaba ha noqotee, haddii aad tahay uun qof ku soo qulqulaya hagitaan maaliyadeed oo casiir leh, waxaa jira 10 baloogyo yaab leh oo laga bilaabo. Fadlan ogow, kuwani waa talooyin kaliya oo waajib kuguma aha inaad raacdo talada ay bixiyeen baloogyada.
Sida loo bilaabo baloog maaliyadeed shaqsiyeed
100ka ugu sarreeya blogyada maaliyadeed ee gaarka ah 2021
Intee in le'eg ayay bloggers maaliyadeed shaqsiyeed kasbadaan
15 -ka Madal ee Blogging -ka ugu sarreeya Bilaash 2021
Siyaabaha ugu Wanaagsan ee Lacag Loogu Sameeyo Blog -ka 2021 | Eeg Khiyaamadayada
Sida Archimedes u lahaa “Eureka!” daqiiqad dhexdeeda qubeyskiisa, adiguna sidoo kale waad ku yeelan kartaa epiphany -kaaga midkood…